Madaxweynaha Puntland oo tababar u soo xiray Ciidan ka tirsan Daraawiishta - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Puntland oo tababar u soo xiray Ciidan ka tirsan Daraawiishta
Madaxweynaha Puntland oo tababar u soo xiray Ciidan ka tirsan Daraawiishta
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xerada ciidanka Xorgoble ee Degmada Qardho tababar ugu soo xiray dufcaddii 2aad ee dhammaysata tababarkooda, kuwaasi oo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Dowladda Puntland.
Ciidankan tababarku usoo xirmay maanta ayaa ka kala yimi dugsiyada Xorgoble, Badhan iyo Xerada 54aad ee Taliska Ciidanka Daraawiishta, waxaana ciidanka maanta tababarku u xirmay ay soo bandhigeen xirfado kala duwan oo ay barteen mudadii uu u socdey tababarku.
Madaxweyne Deni oo la dardaarmay ciidanka maanta tababarku u soo xirmay ayaa sheegay in Dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliyaba uu farayo Dowladda ilaalinta sharafta shacabka, isagoo xusay in Dowladda Federaalka isku koobtay Dhaqaalaha Beesha caalamku ku bixiyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliya iyo sugidda Amniga.
“Sida Dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliyaba farayo Dowladda waajibaadka laga rabo waa ilaalinta sharafta karaamada iyo amniga ummadda ay u shaqaynayso, shaqadaasina waxaa laga rabaa waa ciidamada, sidaasi daraadeedna waxaa Xukuumadda ka go’an in ahmiyadda koowaad, labaad iyo Sadexaadba la siiyo dhismaha ciidamada kor u qaadidda noloshooda, dhammaystirka agabkii ay ku shaqayn lahaayeen, si ay u noqdaan dad waajibkooda gaara”ayuu yiri Saciid Deni
“Waxaa nasiibdaro ah iyadoo aduunka uu uga baxo boqolaal million oo dollar sidii Soomaaliya uga caawin lahaayeen Amniga, iyo dhismaha ciidanka in wixii ay ka mudnaayeen Puntland inaysan ka helin Dowladda Federaalka Soomaaliya, taas waxaan rajaynayaa in caalamku garto. Masuuliyiinta Dowladda Federaal ka ah hanti ay hayaan loogu dudimaayo, balse waa inaysan caqabad ku noqon waxa beesha caalamka laga helayo, waxaan rajaynayaa in caqligu uu taliyo, duruuf walbaa deegaannada kale waa ka jirtaa, hadana cadawgu meel walba waa joogaa, dhismaha ciidankana meel walba waa looga baahan yahay, waxaase Alle mahaddiis ah Puntland oo 21 sano jirtay oo masuuliyiintii kala dambeysey ee soo maray ay garteen ahmiyadda ciidamadu leeyihiin”ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku amray ciidamada Puntland inay u diyaar garoobaan difaaca dhulkooda iyo xuduudahoodaba.